6 Siyaabaha Loo Helo Shahaadada ITIL - Tababarka ITIL ee Gurgaon
Sida Loogu Helo Shahaadada Aqoonsiga ITIL ee Gurgaon
ITIL ayaa ah xarun lagu magacaabo "Information Technology Infrastructure Library". Waxaa asal ahaan asal ahaan ka soo baxay 1980s by Xarunta Komputerka iyo Isgaarsiinta Isgaarsiinta (CCTA) si loo horumariyo heerarka heerarka. Bishii Abriil 2001, CCTA waxaa lagu biiriyey xafiiska Xafiiska Boqortooyada Ingiriiska - OGC.
ITIL waa habka ugu wanaagsan ee loogu talagalay Maareynta Adeegga IT (ITSM) kaas oo gacan ka geysanaya helitaanka taageero wax ku ool ah iyo keenid adeegyo farsamo oo tayo sare leh. Koorsada shahaadada ITIL Foundation waxay bixisaa aqoon ficil ah oo ku saabsan fikradaha muhiimka ah, mabaadiida, hababka iyo hawlaha looga baahan yahay ITSM. Koorsadu waxay diyaarisaa musharax si guul leh u muuqda ITIL Foundation imtixaanka shahaadada.
Imtixaanka ITIL Foundation wuxuu daboolayaa hababka 26 ITIL hoosta shan qaybood:
Hagaajinta Adeegyada Soodhawaynta ah
Shahaadada ITIL waxay xaqiijineysaa xirfadaha xirfadeed ee musharraxa ee u adeegsanaya IT sidii qalab awood leh oo fududeynaya kobaca ganacsiga.
Halkan waa liisto buugaag wanaagsan oo ardaydu ay akhrin karaan si ay u helaan shahaadada ITIL:
Maareynta Adeegga IT: Tilmaamaha loogu talagalay Naadiyada imtixaanka ITIL
Waxaa daabacay BCS oo ay soo saareen R.Griffiths, E. Brewster, A. Lawes iyo J. Sansbury, buuggani waa kheyraad waxbarasho oo weyn oo loogu talagalay kuwa doonaya in ay cadeeyaan imtixaanka ugu horeeya.
Eeg Sidoo kale:Fursadaha Shaqo ee Shahaadada ITIL
Waxay u fiicnaan laheyd in ay ugu yeerto buug waxbarasho oo ay ka caawiso ardayda inay ku qiimeeyaan heerkooda aqooneed iyo diyaargarowgooda si ay ugu muuqdaan imtixaanka. Tani waa shey rasmi ah oo ruqsadda leh oo loo qoondeeyey afar qaybood - qaybta kowaad waxay bixisaa guudmar maareynta adeega; qaybta labaad waxay ka kooban tahay qaybo kala duwan oo ah qaab nololeedka ITIL, qaybta sadexaadna waxay ku siinaysaa aragti hababka ITIL & hawlaha; Qaybta afaraad ayaa dhan oo ku saabsan cabbiraadda iyo qiyaasaha.
Waxaa bixiya OGC, buugani wuxuu faahfaahin ka bixinayaa shan qaybood oo aasaasi ah ITIL shan marxaladood. Waxay ka bilowdaa istaraatijiyada adeega, waxay u guureysaa marxaladda horumarinta adeegga joogtada ah waxayna dabooleysaa dhammaan qaybaha kale ee u dhexeeya.
Shanta buug ee ku jira suugaantu waa isku xidhan yihiin marxalad kastana waxay ku xiran tahay heerka hore. Dhammaantood waxay ka wada hadlaan maareynta adeegga sida ficil. Habka Luqadaha Hababka ee ITIL wuxuu sidoo kale heli karaa PDF.
Buugga Tixraaca Imtixaanka ITIL Foundation 2011
Buuggan tixraaca ah waxaa qorey labo ka mid ah tababarayaasha ITIL ee ixtiraamka badan - Helen Morris, iyo Liz Gallacher. Waxay tilmaamaysaa habka ITIL nolol-maalmeedka habka ugu fudud ee fududeynaya in la fahmo. Waxaa jira isticmaalka deeqsi ah jaantusyada, jaantusyada iyo sawirada kuwaas oo ardayda u oggolaanaya inay waxbartaan. Xoggu wuxuu ku jiraa habka macquulka ah waxaana lagu faahfaahiyay tusaalooyin dhab ah oo nolosha iyo su'aalaha dhamaadka cutub kasta si loo fududeeyo fahamka.
ITIL Foundation Essentials: Imtixaanka Muhiimka ah ee aad u Baahantahay
Waxaa qorey macallin maamulaha ah ee ITIL, Claire Agutter, buugani waa kheyraad cajiib ah oo loogu talagalay ardayda barashada. ITIL Foundation Essentials waxay ka hadlaysaa waxyaabaha muhiimka ah ee ITIL si habeysan oo toosan, si fudud oo fudud loo fahmi karo.
Eeg Sidoo kale:Su'aalaha iyo Jawaabaha Sample for ITIL Imtixaanka 2017
Inkasta oo jaantusyada yaryar aysan u muuqan mid muuqaal ah haddana waa hage habraac ah oo bilawga ah oo doonaya in la helo mawduuca guud.
Tilmaamaha Aasaasiga ah ee ITIL V3
Buug-gacmeedka Ururka ITIL V3 waa eBook bilaash ah oo ay bixiso Taruu, oo ah shirkad maamusha maamulka IT-ka ee Indiana. Waa xarun 45-bog ah oo ka hadlaysa dhammaan fikradaha koorsada aasaasiga ah ee IITL. Isticmaalkeeda habboon ee joornaalku waxay ka dhigeysaa mid aad u wanaagsan. Waa mid kooban oo sharraxaya waxyaabaha aasaasiga ah ee si fudud loo fahmi karo. Waxay sidoo kale u adeegtaa buug hordhac ah oo loogu talagalay dadka bilowga ah iyo kuwa doonaya inay xoojiyaan aqoontooda iyaga oo adeegsanaya ilo kale.
Ku gudubka imtixaanka ITIL Imtixaankaaga - 2011 Edition
Buugani waa saaxiibka ugu fiican ee loogu talagalay ardayda raadinaya shahaadada aasaasiga ITIL. Gudbinta imtixaanka ITIL waa daabacaad rasmi ah oo ku saabsan ITIL (ie TSO) waxaana taageersan Yoolalka Rasmiga ah ee ITIL. Tilmaamahan tababarka wuxuu bixinayaa tusmo dhamaystiran oo ku saabsan qorshaha ITIL. Waxay koobeysaa cutubyada ma aha oo kaliya maareynta adeegga iyo mid kasta oo ka mid ah marxaladda nolosha mudada dheer ah laakiin waxay bixisaa macluumaad ku saabsan imtixaanka laftiisa.
Eeg Sidoo kale:Shahaadada ITIL - Hagid dhammaystiran
Liistada kor ku xusan ee buugaagta ayaa ka fog daal. Waxaa jira ilo kale oo badan oo loo heli karo ardayda si loo hagaajiyo aqoontooda iyo inay ka caawiyaan tababarka ITIL iyo shahaadada.
• Tababaraha aasaasiga ah
# shahaadada asaasiga ah
• Tababar ku saabsan Guriga
# shahaadada sharraxaadda Guriga